अस्पतालभित्र राजनीति गर्दिनः मेसु पौडेल – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अस्पतालभित्र राजनीति गर्दिनः मेसु पौडेल
२०७१ फाल्गुन २८, बिहीबार ०१:३७ गते
भरतपुर । भरतपुर अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनले भरतपुर अस्पतालका नवनियुक्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. विजयप्रसाद पौडेललाई बुधबार अस्पतालमा स्वागत गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक, पारामेडिक्स, नर्सिङ विभागका सिनियर कर्मचारीहरुले नवनियुक्त मेसु डा. विजयप्रसाद पौडेललाई स्वागत गरेका थिए । डा. पौडेल फागुन २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा नियुक्त भएका हुन् । युनियनका अध्यक्ष ईश्वरी खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदी रहेका थिए ।
कार्यक्रममा नवनियुक्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. विजयप्रसाद पौडेलले भरतपुर अस्पतालको विकास र कर्मचारीहरुको हितका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘मेरो बाँकी सरकारी जागिरे जीवन भरतपुर अस्पतालको विकासमा लगाउँछु । म कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई आस्थाका आधारमा विभेद गर्दिन्, अस्पतालभित्र कुनै राजनीति पनि गर्दिन र अरुलाई गर्न पनि दिन्न, म कसैलाई आसेपासे बनाउँदिन् ।’ कार्यक्रममा डा. पौडेलले भने,
कार्यक्रममा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीले भरतपुर अस्पतालमा आफूले विधि र पद्धति बसाल्न चाहेको भन्दै कुनै भनसुन वा हस्तक्षेपका आधारमा काम नहुने अवस्थाको निर्माणमा लागेको बताए । उनले भरतपुर अस्पतालको मह¤वाकांक्षी योजना ब्लक सी निर्माणको काम अघि बढेकोे जानकारी दिए ।
स्वागत कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताल कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष हिरामान महर्जन, नर्सिङ प्रमुख मीरा अधिकारी, डा. उन्नत श्रेष्ठ, डा भोजराज अधिकारी, लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले मन्तव्य राखेका थिए ।